Ndeapi masekete anogona kubatsirwa kubva padanho rekukwira? | Ehupfumi Zvemari
Iko kushanduka kwemitero yezvibereko ndechimwe chezvinhu zvinotarisisa mafambiro ayo misika yemasheya kutenderera pasirese. Mumatanho ese ari maviri, zvinoenderana nekuti iyo nzira yemari ndiko kukwidziridza kana kudzikisa. Chichava chinopfuura kusarudza paramende yekuti iwe uzarure kana kuvhara nzvimbo mumisika yequity. Kusvika kumatanho anorema kwazvo sezvamakamboona mumakore achangopfuura. Kufuridzirwa nemitemo yakaitwa zvese kune rumwe rutivi uye imwe yeAtlantic.
Mumamiriro azvino ehupfumi, sarudzo dzemabhanga epakati enzvimbo huru dzekugadzira munyika dziri kuwedzera kukosha. Nekujaira kukuru mukufamba uko kwakagadzirwa semhedzisiro yezvinangwa zveavo vane mutoro wemitemo yemari. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kukuita iwe kuhwina kana kurasikirwa nemari yakawanda mune mashandiro aunogadzira kubva zvino zvichienda mberi mumisika huru yezvemari. Ndosaka zvichikosha kuti iwe nyatso kutarisisa kushanduka kwayo munguva pfupi nepakati.
Kubva pane akajairika mamiriro, hapana mubvunzo kuti mitengo yemari ichave inopfuura yakakosha chinhu kuti iwe ugadzirire yako mazano ekudyara. Pamusoro peimwe kirasi yekuongorora, zvese zviri mu technical kubatana sekukosha. Neichi chikonzero chakafanana, iwe unenge uine chinopfuura chikonzero chimwe chekutonga yako portfolio yekudyara. Nedzimwe tsika dzakapfava kupfuura vamwe kutora mafambiro aya mumutengo wemari. Chero nzira, zviise iwe mune yakaipisisa mamiriro ezvinhu, nekuti zvese zvirevo zviri munzira yekuwedzera kwemitero.
1 Mhando: nei vari kusarudza?
2 Ndeapi mapoka ari panjodzi zvakanyanya?
3 Mamwe matunhu akabatsirwa zvikuru
4 Ndeapi maitiro ako?
Mhando: nei vari kusarudza?
Nezve misika yemari yeAmerica, zvinhu zvinoita kunge zvakajeka kupfuura zviri muEurope. Hazvishamise kuti hazvishamise kuti zvese zvichave zvinokonzeresa pamitemo ye Donald Trump vachaonana gore rinouya. Kubva pane ino yakaoma mamiriro, hakuzovi nesarudzo kunze kwekungwara nehumwe hunhu hweAmerica zvekare. Vanogona kuburitsa zvinopfuura kamwe kushamisika kwakashata kubva panguva dzino. Nekuti kumwe kwekutyisa kukuru kunobata varimi vadiki nepakati varimi ndekwekuti tsika yemisika yemunzvimbo ino yehupfumi inogona kudzoserwa chero nguva. Sezvatakakuyambirai kubva pasvikiro iri.
Mitero yakaderera yemitero inogara iri yakawanda inobatsira pamisika yemari kupfuura mune yakapesana maitiro. Nezvikonzero zvakatotsanangurwa muzvinyorwa zvakapfuura. Neiyi tsananguro chero Shanduko yemaitiro vanogona kumanikidza nzvimbo pfupi pane vatengi. Chero zvazviri, chichava chikonzero chakakwana chekuti iwe usiye nzvimbo dzako kana iwe ukaiswa mari mumisika yemari yemari. Iyo inogona kuve iri nzira inoshanda kwazvo yekudzivirira yako mari zvakanyanya zvine simba munzira dzako dzehurongwa.
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndizvo zviri kuitika mumhando dzenyika yekare. Panogona kuitika chero chinhu. Maitiro anogadzirwa nemisika yemari kubva ikozvino zvichienda hazvigone kutarisirwa. Kudzivirirwa kudiki hakuzombokuvadza iwe kukudziridza chero mhando marongero. Kunyangwe zvese zvikaita senge zvinoratidza kuti mwero wekukwira uchave uri pakati nepakati. Asi kwete mukati memwedzi mishoma inotevera sezvo maitiro akafanana achachengetwa kusvika pari zvino. Ndokunge, nemutengo wakachipa kwazvo wemari, panhoroondo 0%.
Ndeapi mapoka ari panjodzi zvakanyanya?
Gore rino rinogona kunge riri gore remabhangi. Ichi chirevo chevazhinji vevaongorori vanonyatsotevera misika yemari. Nechikonzero chiri nyore kwazvo chekutsanangura uye icho chinovakirwa pachokwadi chekuti ivo ndivo vanove vanonyanya kubatsirwa nesarudzo inogona kuitwa ne European Central Bank (ECB) kukwidza mitengo mukati megore rino razvino. Muchiitiko ichocho, zvaizovatendera kuti vagadzire yakakwira kudzoka kumaaccount avo ebhizinesi. Semhedzisiro yekukwira kwezvibereko pamitero yayo yese yechikwereti. Nezororo mushure memakore akashata akohwewa mumwedzi ichangopfuura.
Icho, saka, chikamu chaunofanira kubhadhara kutarisisa kubva ikozvino. Uine kumusoro kugona zvine simba zvechokwadi kana chiitiko ichi chikazadzikiswa nemitero munzvimbo ye euro. Muchokwadi, panguva ino ivo vakatorwa mumisika nesimba guru. Pamusoro pezvimwe zvikamu zvekukosha kwakakosha uye izvo zviri kusarira kumashure zvine chekuita nemapoka akakosha emari munyika.
Mukufunga kwenyanzvi dzezvekodzero, pane boka rakasarudzwa remabhangi ayo akawanda anoda uye anogona kuve chinhu chaunotenga kubva ikozvino. Mupfungwa iyi, iwo mabhanga anoongororwa nevakawanda zvakanyanya ndeBBVA, Bankinter neBankia. Ose ari maviri maererano nezviwanikwa zvaro uye zvakakosha. Wechipiri wavo ari bheji rakajeka pachikamu chevamiriri vezvemari. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona zvakare kuve ivo vanonyatsotora sarudzo isati yakwana pane shanduko mune inoitika mune shanduko yemitero yemitero.
Mamwe matunhu akabatsirwa zvikuru
Kumwe kubhejera kukuru kwekupera kwegore kana chiitiko ichi chikazadzikiswa iwo anonzi macultical values. Pakati pazvo zvimire indasitiri, zvigadzirwa zvepamusoro uye zvekushanya nemasevhisi, pakati pevamwe. Mune yekupedzisira, ndege, mapoka ehotera uye nzvimbo dzekuchengetedza dzinomira. Muzviitiko zvese, ivo vanozogona kuita zvirinani kupfuura mamwe ese maseketi emusika wemasheya. Uine mikana yakakwira yekuwana purofiti yakakwira kana iwe ukavasarudza kuti vaise mari yako mukuchengetedza panguva ino.
Mune zvimwe zviitiko, ivo vari kutotengesa pane imwe dhisikaundi kubva pamutengo wakanangwa wavakapihwa nevamiriri vezvemari. Iine mikana inogona kusvika kusvika ku25% mune zvakanakira zvirevo zvezvido zvako semudhara mudiki nepakati. Iwo unogona kuve mukana wekuvhura zvinzvimbo zvimwe zvekuchengetedzeka uye nekuzvisanganisira mune yako inotevera yekudyara portfolio. Kukuvadza kwemakambani akanyorwa kushoma mukana wekukura kumuka mushure mekuwedzera kwezvibereko.
Ndeapi maitiro ako?
Asi izvo zvinonyanya kukosha kwauri ndeyekuti iwe ungatora sei mukana weichi chiitiko chitsva chinorasikirwa kuratidza hupfumi hwenyika yekare. Kunyangwe kwavari kwavari iwe unofanirwa kugadzirisa ako equity masystem, dzimwe nguva nenzira ine hukasha zvakanyanya kupfuura zvakajairwa. Uchave uine ruzivo rweapo neapo nezve zvaunofanirwa kuita kuburikidza nezvinangwa zvinoratidzwa nana director, Mario Daghi, mumisangano inotevera yeECB. Iko kune kusahadzika, dzimwe nhau nezve yavo chaiyo monetary policy vavariro dzinogona kuoneka. Izvo zvaunogona kushandisa mamwe marongero mune ako mashandiro emusika wemasheya. Izvi ndizvo zvimwe zvacho,
Simbisa nzvimbo dzako mu zvikamu zvakanyanya zvakabatsirwa nekukwira kwemitero. Chichava chiero chinonyanya kushanda chaunogona kuisa mumisika yemari kubva zvino zvichienda mberi. Iko, ichave yakakosha kukosha kuti
Ratidza a chenjedzo huru nemabasa ako muzvikwereti, nekuti kazhinji kukwira kwechido mumisika kunogamuchirwa zvakashata navo. Kunyanya mumazuva mushure mekutora sarudzo nemabhangi epakati.
Iko kunogara kune nhevedzano yezvigadzirwa zvemari zvinofarirwa nezviito zvemari izvi. Kunyanya, kubva kumari yekudyara. Ndiko kwaunofanira kudururira zviito zvako zvese kuti kuchengetedza kwako kubatsire pamwe nezvivimbiso zvakakura.
Inogona kunge iri yekunyepedzera yakanaka kune dzokera kune zvakajairika zvigadzirwa zvebhangi. Nguva yekuisa mari, manotsi ebhengi ekuzivisa uye kunyangwe zvisungo zvemunyika. Nekuti mukuita, ivo vachawedzera mashandiro avo kuburikidza neaya matanho. Nedzidzo yakatarwa uye yakavimbiswa pane iyo mari iyo inokupa iwe chengetedzo huru.
Iwe unofanirwa kurangarira kuti mune izvi zviitiko inflationary maitiro anoputika kumusoro uye nekudaro iwe ucharasikirwa nesimba rekutenga pamwe nemari yaunowana pane yako mari. Izvo hazvizove zvakagutsa huwandu sepakutanga sezvo zvichizadzikiswa nekuwedzera kwemitengo mukutenga kwako kukuru.
Chero zvazvingaitika, kukwira kwezvikwereti haisi nhau dzakanaka kune zvaunofarira semusimari mudiki. Asi zvinopesana, ichaunza kusagadzikana kukuru mumisika yemari kubva panguva yekushandisa kwayo.
Ichave nguva yakakodzera kwazvo kwauri gadzirisa yako mari yekudyara. Kuburikidza nekuongorora kwakazara kwemari yemari mauri uine nzvimbo dzakashama. Iwe unokwanisa kuzvitsiva nezvimwe zvakanaka kwazvo kune idzi shanduko shanduko muhupfumi.
Sezvazvinowanzoitika muzvikwereti, iyo mabhizimusi mikana ivo vachazobuda zvakare mune idzi nyowani mamiriro ehupfumi. Iwe unongofanirwa kuti uvaone kuti vavhure zvinzvimbo mavari uye nenzira iyi iwe unokwanisa kuzadzisa zvinangwa zvako zvinobudirira.
Uye sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, inogona zvakare kuve nguva yekuti iwe utore mazuva mashoma e kuputsa muzvikamu. Pasina chimwe chinangwa kunze kwekutarisa kuti chaiko shanduko yemisika yemari iri mumazuva mashoma anotevera. Uku kuita kunenge kuchikosha.
Chekupedzisira, haugone kukanganwa kuti isu takatarisana ne shanduko yekuchinja kusvika pamitero yezvibereko. Uye kuti uchafanirwa kuita zvakawanda nedanho rekudzoserwa kwehupfumi hwenyika huru dzenyika. Nekusiyana kweimwe divi kana imwe uye izvo zvinopedzisira zvichikanganisa mabhegi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndeapi masekete anogona kubatsirwa kubva padanho rekukwira?
Yakagadziriswa mari nezvikwereti